on October 06, 2016 Related - Maung Yin Nga Tay Travelogue
မဲရ်လို၊ သူကတော့ Easy to Drink. "Introducing" for New Red-Wine Drinkers. ဆိုပြီး ဝိုင်ဆိုတာ စတင်မြည်းစမ်း သောက်တတ်သူများအတွက် ကောင်းမွန်သင့်မြတ်လှတဲ့ စပျစ်သီးမျိုးပါ။
အဲသလိုမျိုးသော ဒေသတွေ အများကြီးရှိတာမှာ ဂရိ ပြင်သစ် အီတလီ စပိန်ပေါ်တူဂီ ဂျာမဏီတို့လို Pays d'Origine de Viticulture (Old World) ဝိုင်ကမ္ဘာဟောင်း နိုင်ငံတွေနဲ့ တောင်အမေရိက ချီလီ အာဂျင်တီးနား အမေရိကား သြစတြီး ယားတို့လို Nouveaux Pays de Viticulture (New World) ဝိုင်ကမ္ဘာအသစ်နိုင်ငံတွေဆိုပြီး ခွဲခြား ပြောကြတာလည်း ရှိပါ သေးတယ်။